Imizuzu eyi-15 ukusuka ePort Louis, imizuzu engama-30 ukusuka kubakhenkethi emantla, indlu enkulu (90m2) enegumbi lokulala elinye kunye negumbi lokuhlala elineebhedi ezi-2 zesofa (abantu aba-4). Ngedama lokuqubha, i-wifi, i-canal plus kunye negadi enkulu enoxolo.
Ibekwe eBaie Du Tombeau imizuzu eli-15 ukusuka ePort Louis, ikomkhulu, kunye nemizuzu engama-30 ukusuka kubakhenkethi emantla. Igumbi elikhulu lokulala elinye (90m2) + iisofa ezi-2 kwigumbi lokuphumla. Iqula lokuqubha kunye negadi entle, i-wifi, i-canal plus ibandakanyiwe.
Ngaphesheya kwendlela: elunxwemeni.
Sinikezela ngendlu ebanzi ye-90 square metres ehonjiswe ngobumnandi. Inegumbi lokulala eli-1 elinesibini, igumbi lokuhlambela eline-ensuite, indawo yokuhlala ebanzi enokulala iindwendwe ezi-2 ngaphezulu. Indlu yonke ejonge kwigadi eshinyeneyo enedama lokuqubha.
Sihlala kufutshane, ukuba iindwendwe zidinga naluphi na uncedo.